काठमाडौं, ३ मंसिर । सनराइज बैंकले बागलुङमा १३९औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले गण्डकी प्रदेशको बागलुङ नगरपालिका वडा नं २ मा शाखा खोलेको हो ।
काठमाडौं, २६ कार्तिक । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बुधबार सार्वजनिक गरेको तिहारको शुभकामना गीतबाट लिइएका शब्दहरु हुन् । यतिखेर तिहार नजिकिँदै गएको छ ।
काठमाडौं, २६ कार्तिक । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत टिच फर नेपालद्वारा संचालित टिच फर नेपाल फेलोसिप कार्यक्रमलार्ई ८ लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ शाखा बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकामा
काठमाडौं, २५ कार्तिक । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको नयाँ शाखा बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिका वडा नं. १० मा सञ्चालनमा आएको छ । नयाँ शाखा सञ्चालनमा आएसँगै बैंकको शाखा कार्यालयहरुको संख्या २६२ पुगेको छ ।
महालक्ष्मी बैंक र एसआरएल प्रा.लि.बीच सम्झौता
काठमाडौं, २५ कार्तिक । महालक्ष्मी बैंक र एसआरएल प्रा.लि.बीच सम्झौता भएको छ ।
पवन मिठाई भण्डारमा कुमारी बैंकका ग्राहकलाई ५% छुट
काठमाडौं, २० कात्तिक । कुमारी बैंकका ग्राहकले पवन मिष्ठान अन्तर्गतका मिठाई पसलका खाद्यवस्तु किन्दा ५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् ।
दराजको ‘दराज ११.११ सेल’ तयारी पूरा
काठमाडौं, १९ कार्तिक । दराजको वार्षिक ११.११ सेल यस कात्तिक २६ मा आयोजना गर्ने भएको छ ।
नवलपुरमा प्रभु बैंकको शाखा कार्यालय सञ्चालन
काठमाडौं, १९ कार्तिक । प्रभु बैंक लिमिटेडले शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा बिहीबारदेखि नवलपुर (नवलपरासी पूर्व) जिल्लाको देवचुली नगरपालिका वडा नं. १५ स्थित प्रगतिनगरमा २११औं शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
एनएमबी बैंकद्वारा ‘एनएमबी सापटी’ कर्जा
काठमाडौं, १८ कात्तिक । एनएमबी बैंकले सापटी कर्जा सुरु गरेको छ ।
काठमाडौं, १७ कार्तिक । कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ बाटुलेचौरस्थित मातृशिशु मितेरी हस्पिटलमा प्रभु बैंक लि. ले सोमबारदेखि आप्mनो एक्स्टेन्सन काउण्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
काठमाडौं, १७ कार्तिक । आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडले ईन्टरनेट र मोबाइल बैंकिग सेवा प्रयाेग गर्ने आफ्ना ग्राहकहरुलाई डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न खल्ती डिजिटल वालेटसँग सम्झौता गरेको छ।
काठमाडौं, ७ कार्तिक । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्जन गरेको मुनाफाबाट आफ्ना शेयरधनीहरुलाई १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सिजी ब्रान्डको वेबसाइटबाट सामान किन्दा उपहारै उपहार
काठमाडौं, २९ असोज । सिजी ब्रान्डले दशैंरतिहार पर्वलाई लक्षित गरी विभिन्न किसिमका उपहार योजना बजारमा ल्याएको छ ।
बागलुङ, २६ असोज । नेपाल सूचना तथा सञ्चार केन्द्रीय सहकारी संघका उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य मनकुमारी जिसी केसीले आम समुदायको दुखको साथी बनेको सहकारी क्षेत्रको साख बढाउनका लागि म्यानेजर्सहरुको भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
कुमारी बैंकद्वारा निःशुल्क पिसिआर क्याम्प
काठमाडौं, असोज २२ । कुमारी बैंक लिमिटेडले काठमाडौं मेडिकल कलेजसँगको सहकार्यमा तीन दिने ‘निःशुल्क पिसिआर परीक्षण क्याम्प’आयोजना सम्पन्न गरेको छ ।
इन्भेस्टमेन्ट बैंकको नयाँ शाखा महेन्द्रनगरमा
काठमाडौं, असोज २२ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले महेन्द्रगरमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ ।
२२ असोज, काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र नक्साल, काठमाडौंस्थित मुख्य कार्यालय रहेको लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिबीच सम्झौता भएको छ ।
काठमाडौं, २१ असोज । आइएमई ग्रुपअन्तर्गत संचालित आइएमई मोटर्स प्रा.लि. द्वारा प्रवद्र्धित अशोक लेलैण्ड र सनराइज बैंकबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सानिमा बैंकले ल्यायो ‘दशैँ धमाका योजना’
काठमाडौं, २१ असोज । सानिमा बैंकले बडा दशैँको अवसरमा ग्राहकका लागि ‘दसैं धमाका’ योजना ल्याएको छ ।